Tambavy CVO Misy farmasia mbola tsy sahy mivarotra azy
Afera Covid organics Voaheloka handoa 24 tapitrisa ireo voapanga
Sempotry ny covid-19 Iarivo 2 maty, tranga 88 iray andro
Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo Nijoro vavolombelona fa voan’ny Covid-19
Kaominina Antananarivo Mpiasa iray matin’ny coronavirus
Mararin’ny COVID 19 etsy amin’ny CMC Haraha-maso akaiky ny fiasan’ny fanafodiny
Mahajanga Niakatra ho 7 ireo voan’ny coronavirus
Fiparitahan’ny Coronavirus Miverina indray ny fampihorohoron-tsain­a
Na dia efa zaraina isam-pokontany aza ilay tambavy CVO na covid organics dia fantatra fa mbola hifampitadiavana be ihany izy ireny amin’izao.
Eny amin’ny toeram-pivarotam-panafody na farmasia no tena handehanan’ny mpanjifa sy hanontaniany izany matetika. Raha araka ny resaka nifanaovana tamina tompon’andraikitra iray amina toeram-pivarotam-panafody iray anefa dia mbola tsy afaka mivarotra ity tambavy ity izy ireo fa miandry ny fanadihadiana hataon’ny holafitry ny farmasiana. Ho an’ireo toeram-pivarotana enta-madinika maro samihafa ihany koa dia mbola vitsiana no manana azy ireny. Ho an’ireo tsena lehibe eto an-drenivohitra dia maromaro no efa manana azy. Ho ana tsena lehibe iray eny Ankorondrano eny ohatra dia tsy ampy nojifain’ny mpanjifa tao anatin’ny 10 minitra ny tambavy CVO 33 cl miisa 300. Tena mandeha ny tsena raha araka ny fanazavana azo ka ny mpamatsy indray no tsy maharaka.